किशोर उमेरका छोराछोरीका लागि कस्तो वातावरण जरुरी छ ? - A2Z Online Khabar A2Z Online Khabar
किशोर उमेरका छोराछोरीका लागि कस्तो वातावरण जरुरी छ ?
१२ बर्षदेखि १९ बर्षसम्मको उमेर चरण, जसलाई हामी किशोर अवस्था भन्छौं । यतिबेला शारीरिक र मानसिक रुपले उनीहरुमा तिब्र परिवर्तन हुन्छ । यसलाई ‘गोल्डेन एज’ पनि भनिन्छ, जो जीवनकै सर्वाधिक स्मरणिय क्षण समेट्ने मौका हो । तर, ठीक यहि चरणमा पुगेपछि किशोर-किशोरीले विभिन्न किसिमको परिवर्तनलाई आत्मसात गर्नुपर्ने हुन्छ ।
हर्मोनल परिवर्तनले उनीहरुको मन–मस्तिष्कमा हलचल मच्याइरहेको हुन्छ । मुड स्विङको कारण स–सानो कुरा कुरामा उनीहरुले अप्रत्यासित व्यवहार देखाउँछन् । यसका साथै विपरित लिंगप्रति स्वभाविक आकर्षण पनि बढ्छ ।
यदि कुनै किशोर÷किशोरीसँग आफ्ना छोराछोरी आकर्षित भइरहेका छन् भने यसलाई लिएर धेरै चिन्तित हुन आवश्यक छैन । यस्तो सम्बन्धमा रोकटोक पनि नगरौं । सबै साथीहरुको बारेमा पूर्ण जानकारी हुन आवश्यक छ ।
केहि महत्वपूर्ण कुरा